Commentary Archives - Page3of 15 - Guna Raj LuitelGuna Raj Luitel
हिन्दू ब्राण्डको स्वामित्व जोगाउन थापाको ‘व्याक गियर’0ON: November 3, 2014
वामदेवले शिवको नाम लिएपछि उतर्सिएको राप्रपा नेपाल संसदमा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस र एमालेका सभासदसँग झण्डै कुटाकुटको स्थितिबाट फर्केका राप्रपा नेपालका एक नेतासहितक एउटा समूहसँग शनिबार बेलुका भेट हुँदा एकले भने, ‘हामीले बामदेव गौतमलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, जसले हाम्रो सुस्ताइसकेको आन्दोलन फेरि जगाइदिए।’ व्यवस्थापिका–संसदको… बृस्तृत…
देश टुक्य्राउने माग गर्न पाइन्छ?0ON: September 18, 2014
एक वर्षअघि सिंगापुरको चाङ्गी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ जाँदै गर्दा ट्याक्सी चालकले दायाँतिर फूलैफूलका गमलाले भरिएको एउटा चहुर देखायो। ‘तपाईंलाई थाहा छैन होला यो के हो?’ उसले प्रश्न गर्‍यो। थाहा हुने विषय पनि थिएन। थाहा छैन भन्ने जवाफ पाउनासाथ उसले सगर्व भन्यो, ‘महाशय, यो… बृस्तृत…
जाग नेपाली अब जाग0ON: September 3, 2014
मित्रहरूले हामीलाई कसरी लिन्छन् भन्ने हामी प्रायः थाहै पाउँदैनौ। त्यसमाथि पनि काठमाडौं आएका बेला कूटनीतिक मित्रहरूले हाम्रा हिमाल, पहाड र तराईका दृश्यको वर्णन गरेर झनै फुरुङ्ग पारिदिन्छन्। त्यसपछि त के चाहियो र? हामी पनि हावामा उडिहाल्छौँ। प्रकृतिले दिएको सुन्दर देशलाई झन् सुन्दर… बृस्तृत…